टी २० विश्वकपः १८ वर्षपछि न्युजिल्याण्डलाई हराउला त भारतले? - Dainik Online Dainik Online
टी २० विश्वकपः १८ वर्षपछि न्युजिल्याण्डलाई हराउला त भारतले?
प्रकाशित मिति : १४ कार्तिक २०७८, आइतबार २ : २५
काठमाडौं। टी २० विश्वकपको दोस्रो खेलमा भारतले आज न्युजिल्याण्डको सामना गर्दैछ। यी दुई टोलीबीचको खेल दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा आज साँझ ७ः४५ मा सुरु हुनेछ।
दुवै टोलीले आफ्नो पहिलो खेलमा पाकिस्तानसँग हार व्यहोरेका थिए।
त्यसैले यो खेल एक हिसाबले क्वाटरफाइनल जस्तै बनेको छ। विजेता टोलीलाई सेमिफाइनल पुग्ने बाटो सहज हुनेछ भने हार्ने टोलीलाई अन्तिम चारमा पुग्न निकै कठिन हुनेछ।
भारतले सन् २००३ यता न्युजिल्याण्डविरुद्ध कुनै पनि आईसीसी प्रतियोगिता जित्न सकेको छैन। यसकारण आज किवी टीमलाई हराएर भारत इतिहास लेख्न चाहन्छ।
पछिल्लो एकदिवसीय विश्वकपको सेमिफाइनल ९२०१९० र विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिपको फाइनल २०२१ मा भारत न्युजिल्याण्डसँग पराजित भएको थियो। टी २० विश्वकपमा दुवै टोली दुईपटक आमने सामने भएका छन् भने दुवैपटक न्युजिल्याण्डले जितेको छ।
पाकिस्तानसँगको खेलमा न्युजिल्याण्डले पहिलो खेलमा ब्याटिङ अर्डरको प्रयोग गरेको थियो। ओपनर डेरिल मिचेल र नम्बर ४ जेम्स निशमले पाकिस्तानविरुद्ध खेलेनन् । यसले टोलीलाई चोट पुर्‍यायो। डेथ ओभर आइपुग्दा उनको क्रिजमा कुनै ठूलो फिनिसर थिएन। र हारको सामाना गर्नु परेको थियो।
भारतका लागि हार्दिक पाण्ड्या फेरि खेलमा फर्किएका छन्। उनले चोटका कारण पाकिस्तानविरुद्ध फिल्डिङ गरेका थिएनन्। यससँगै कुनै एक बलरको दिन खराब भयो भने समस्या कम हुन्छ।
न्युजिल्याण्डका अनुभवी खेलाडी मार्टिन गुप्टिलले बायाँ खुट्टाको औंलामा चोट लागेपछि पाकिस्तानविरुद्धको खेलमा फिल्डिङ गरेका थिएनन्। तर, भारतविरुद्ध उनले खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। जस कारण यी दुई टीमबीचको खेल रोमाञ्चक हुने अनुमान गरिएको छ।
भारत भर्सेस न्युजिल्यान्डः रेकर्ड र हेड टु हेड
१.भारत र न्युजिल्याण्डबीच हालसम्म कुल १६ वटा टी(२० अन्तर्राष्ट्रिय खेल भएका छन् र दुवै टोलीले ८–८ खेल जितेका छन्।
२.टी२० विश्वकपमा न्युजिल्याण्ड भारतभन्दा अगाडि देखिन्छ। किवी टोलीले यस प्रतियोगितामा भारतलाई दुई पटक पराजित गरेको छ।
३.रोहित शर्माले न्युजिल्याण्डविरुद्धको खेलमा भारतका लागि सबैभन्दा बढी ३३८ रन बनाएका छन्।
४.कप्तान केन विलियम्सनले भारतविरुद्धको खेलमा न्युजिल्याण्डका लागि सबैभन्दा बढी ३२५ रन बनाएका छन्।
५.किवी टोलीबाट इश सोधीले भारतविरुद्धको टी(२० खेलमा १७ विकेट लिएका छन्।